ခရစ်တော်သည် မိမိလောကနိုင်ငံတော်ကို မည်သို့တည်ထောင်မည်နည်း။ | How Christ Will Set Up His Earthly Kingdom | Real Conversion
ခရစ်တော်သည် မိမိလောကနိုင်ငံတော်ကို မည်သို့တည်ထောင်မည်နည်း။
ဇန်နာဝါရီလ ( ၁၃ ) ရက်၊ သခင်ဘုရား၏နေ့ ညနေပိုင်းတွင်
“ထိုနေ့ရက်၌ ခြေတော်သည် ယေရုရှလင်မြို့အရှေ့၊ သံလွင်တောင်ပေါ် မှာရပ်၍၊ သံလွင်တောင်သည် အရှေ့ဘက်မှ အနောက်ဘက်တိုင် အောင် အလယ်၌ကွဲသဖြင့် အလွန်ကြီးသောချိုင့်ဖြစ်လိမ့်မည်။ တောင် တဝတ်သည် မြောက်ဘက်သို့၎င်း၊ တဝတ်သည် တောင်ဘက်သို့၎င်း ရွေ့ရလိမ့်မည်။ သင်သည် ငါ့တောင်ကြားချိုင့်လမ်းဖြင့် ပြေးကြလိမ့် မည်။ ထိုချိုင့်သည် အာဇလမြို့တိုင်အောင် မှီလိမ့်မည်။ ယုဒရှင်ဘုရင် ဩဇိမင်းလက်ထက်၊ မြေကြီးလှုပ်၍ သင်တို့သည် ပြေးသကဲ့သို့ တဖန် ပြေးကြလိမ့်မည်။ ငါ၏ဘုရားသခင် ထာဝရဘုရား ကြွလာတော်မူ၍၊ မိမိသန့်ရှင်းသူအပေါင်းတို့သည် ပါကြလိမ့်မည်။ ထာဝရဘုရားသည် တပြည်လုံးတွင် ရှင်ဘုရင်ဖြစ်တော်မူမည်။ ထိုနေ့ရက်၌ ထာဝရဘုရား တပါးတည်း၊ နာမတော်တပါးတည်းဖြစ်တော်မူလိမ့်မည်။”
( ဇာခရိ ၁၄း ၄-၅၊ ၉ )
မြေကြီးပေါ်၌ရှိသောလူတိုင်းက ခရစ်တော်၏ပထမအကြိမ်ကြွလာခြင်းကို ကြားခဲ့ကြ ပြီး ယင်းသည် အပျိုကညာမာရိ၏ဝမ်းဖြင့် ဗက်လင်မြို့သို့ စေလွှတ်တော်မူကြောင်း သိထားပါ သည်။ သင်တို့အားလုံးက ခရစ်တော်၏ပထမအကြိမ်ကြွလာခြင်းကို ကြားသိကြမည်ဖြစ်သည်။ သို့သော် ဒုတိယအကြိမ်ကြွလာခြင်းနှင့်ပတ်သက်၍ သမ္မာကျမ်းစာရည်ညွှန်းချက်က ရှစ်ခုထဲ က အချက်တစ်ခုအားဖြင့် ပထမအကြိမ်ကြွလာခြင်းကို ရည်ညွှန်းထားပါသည်။ ဒေါက်တာ က David Jeremiah ဤသို့ဆိုထားပါသည်။
ဓမ္မပညာရှင်များက ဓမ္မသစ်ကျမ်းရှိ ၃၁၈ ချက်အပါအဝင် ဒုတိယ အကြိမ်ကြွလာခြင်းနှင့်ပတ်သက်ပြီး ကျမ်းညွှန်းပေါင်း ၁၈၄၅ ခုရှိ ကြောင်း ရေတွက်ကြပါသည်။ သူ၏ပြန်လာခြင်းအကြောင်းကို ဓမ္မ ဟောင်းတစ်ဆယ့်ခုနှစ်ကျမ်းနှင့်ဓမ္မသစ်ကျမ်းတွင် အခန်းကြီးတစ် ဆယ်ခုထဲက ခုနှစ်ခုထက်မနည်း အလေးအနက်ထားပြောဆိုပါ သည်။ ( ခရစ်တော် ) ကိုယ်တိုင်က သူပြန်လာမည်အကြောင်းကို နှစ်ဆယ့်တစ်ကြိမ်ခန့် ဖော်ပြထားပါသည်။ ဓမ္မသစ်ကျမ်းတွင် ဒုတိယအကြိမ်ကြွလာခြင်းသည် ယုံကြည်ခြင်းပြီးနောက် ဒုတိယ အရေးပါသောအကြောင်းအရာဖြစ်ပါသည်။ (David Jeremiah, D.D., လောက၌ မည်သည့်အရာဖြစ်လာမည်နည်း။?, Thomas Nelson Publishers, ၂၀၀၈၊ စာ-၂၁၇ )
ဒုတိယအကြိမ်ကြွလာခြင်းနှင့်ပတ်သက်ပြီး အရှင်းလင်းဆုံး သမ္မာကျမ်းစာဖော်ပြချက် မှာ ကျွန်တော်တို့အသုံးပြုထားသည့် ဇာခရိ ၁၄း ၄- ၅ ကျမ်းပိုဒ်ပင်ဖြစ်ပါသည်။ ဤကျမ်းပိုဒ်ထဲ မှ သင်ခန်းစာကြီးသုံးခုကို သင်ယူရရှိပါသည်။
၁။	ပထမအချက်၊ ခရစ်တော်သည် သံလွင်တောင်ပေါ်တွင် ပြန်လည်ဆင်းကြွ လာမည်။
Scofield မှတ်စုသည် လုံး၀ မှန်ကန်မှုရှိသည်ဟု ထင်မိသည်။
ဇာခရိ ၁၄ သည် အကြောင်းအရာတစ်ခုလုံး၏ အဓိကအချက်ကို ပြန်လည်ပြောဆိုခြင်းဖြစ်ပါသည်။ ( အဖြစ်အပျက် ) အစီအစဉ်မှာ ( ၁ ) တိုင်းနိုင်ငံများစုစည်းခြင်း၊ အပိုဒ် ၂ ( “အာမက်ဂဒုန်” ကို ကြည့်ပါ၊ ဗျာဒိတ် ၁၆း ၁၄၊ ၁၉း ၁၁၊ မှတ်စု ) ( ၂ ) လွတ်မြောက် ခြင်း၊ အပိုဒ် ၃၊ ( ၃ ) ခရစ်တော် သံလွင်တောင်ပေါ် ပြန်လာခြင်းနှင့် ခန္ဒာပြောင်းလဲမှု ၊ အပိုဒ် ၄-၈၊ ( ၄ ) နိုင်ငံတော်တည်ထောင်ခြင်း၊ နှင့် စုံလင်သော မြေကြီးကောင်းကြီးမင်္ဂလာ၊ အပိုဒ် ၉-၁၁ (The Scofield Study Bible, ၁၉၁၇ တည်းဖြတ်၊ စာ. ၉၇၈၊ ဇာခရိ ၁၃း ၈ မှတ်စု )
အန္တီခရစ်ဦးဆောင်သည့် တပါးအမျိုးသားကမ္ဘာကြီးတန်ခိုးများက အာမက်ဂဒုံဟု လူသိများသည့် မက်ဂဒိုချိုင့်ဝှမ်းတွင် ဂျူးလူမျိုးများကို တိုက်ခိုက်ရန် စစ်တပ်အလုံးအရင်းကို စေလွှတ်ကြလိမ့်မည်။ အန္တီခရစ်၏စစ်တပ်သည် ယေရုရှလင်မြို့ကို ချဉ်းကပ်ပြီး ခရစ်တော် သည် ကောင်းကင်မှ ရုတ်တရက် ဆင်းသက်လာလိမ့်မည်။ ထို့နောက် သူတို့ကို အနိုင်ယူလိမ့် မည်။ အားလုံးမတ်တပ်ရပ်ပြီး ဇာခရိ ၁၄း ၃-၄ ကို ဖတ်ကြပါစို့။
“ထာဝရဘုရားသည်လည်း စစ်တိုက်ရာ ကာလ၌ တိုက်သကဲ့သို့၊ ထိုလူမျိုးတို့ကို တိုက်သွားတော်မူမည်။ ထိုနေ့ရက်၌ ခြေတော် သည် ယေရုရှလင်မြို့အရှေ့၊ သံလွင်တောင်ပေါ် မှာရပ်၍၊ သံလွင် တောင်သည် အရှေ့ဘက်မှ အနောက်ဘက်တိုင် အောင် အလယ် ၌ကွဲသဖြင့် အလွန်ကြီးသောချိုင့်ဖြစ်လိမ့်မည်။ တောင်တဝတ် သည် မြောက်ဘက်သို့၎င်း၊ တဝတ်သည် တောင်ဘက်သို့၎င်း ရွေ့ ရလိမ့်မည်။” ( ဇာခရိ ၁၄း ၃- ၄ )
“ထိုနေ့ရက်တွင် သူ၏ခြေသည် သံလွင်တောင်ပေါ်တွင် ကျလိမ့်မည်။” ( ဇာခရိ ၁၄း ၄ ) သံလွင်တောင်ပေါ်သည် ယေရုရှလင်မြို့အရှေ့ပိုင်းတွင်ဖြစ်ပါသည်။ အဖမ်းခံရသည့်ညက ယေရှုသွားဆုတောင်းသည့်နေရာလည်းဖြစ်ပါသည်။ တမန်တော် ၁း ၉-၁၂ တွင် မှတ်တမ်း တင်ထားသည့် ယေရှုကောင်းကင်သို့ ပြန်လည်တက်ကြွခဲ့သည့် တောင်လည်း ဤသံလွင် တောင်ပင်ဖြစ်ပါသည်။
“တမန်တော်တို့သည် ကြည့်ရှုလျက်နေကြစဉ်၊ သခင်ဘုရားသည် အထက်သို့ဆောင်ယူခြင်းကိုခံတော်မူ၍၊ မိုဃ်းတိမ်သည် ကိုယ် တော်ကို မျက်ကွယ်အောင် ခံယူလေသည်။ ထိုသို့ကြွတော်မူသည် ကို တမန်တော်တို့သည် ကောင်းကင်သို့ စေ့စေ့မျှော်ကြည့်လို့နေ စဉ်တွင်၊ လူနှစ်ယောက်တို့သည် ဖြူစင်သောအဝတ်ကို ဝတ်ဆင် လျက် တမန်တော်တို့အနားမှာ ပေါ်လာ၍၊ အိုဂါလိလဲလူတို့၊ အ ဘယ့်ကြောင့် ကောင်းကင်သို့မြော်ကြည့်လျက် နေကြသနည်း။ သင်တို့နှင့်ခွါ၍ ကောင်းကင်သို့ဆောင်ယူခြင်းကို ခံတော်မူသော ထိုယေရှုသည် သင်တို့မျက်မှောက်၌ ကောင်းကင်သို့ကြွသွား တော်မူသည်နည်းတူ တဖန်ကြွလာတော်မူလတံ့ဟု ပြောဆို၏။ ထိုအခါ ယေရုရှလင်မြို့နှင့်ဥပုတ်နေ့တနေ့ခရီးသာကွာ၍ သံလွင် အမည်ရှိသောတောင်မှ ယေရုရှလင်မြို့သို့ တမန်တော်တို့သည် ပြန်ကြ၏။” ( တမန် ၁း ၉-၁၂ )
“ခြေတော်သည် သံလွင်တောင်ပေါ်တွင် ရပ်၍” ( ဇာခရိ ၁၄း ၄ ) လက်ဝါးကပ်တိုင်တွင် သံမှုနှင့်ရိုက်ထားသောခြေသည် ကောင်းကင်သို့ပြန်လည်တက်ကြွသည့် ဤတောင်ပေါ်သို့ ပြန်လည်ဆင်းသက်လိမ့်မည်။ တမန် ၁း ၉
သံလွင် တောင်သည် အရှေ့ဘက်မှ အနောက်ဘက်တိုင်အောင် အလယ် ၌ကွဲသဖြင့် အလွန် ကြီးသောချိုင့်ဖြစ်လိမ့်မည်။ တောင်တဝတ်သည် မြောက်ဘက်သို့၎င်း၊ တဝတ်သည် တောင် ဘက်သို့၎င်း ရွေ့ရလိမ့်မည်။” ( ဇာခရိ ၁၄း ၃- ၄ ) ဒေါက်တာ McGee က ဤသို့ဆိုသည်။
ခန္ဒာအပြောင်းအလဲကြီး ဤနေရာတွင်ဖြစ်ပျက်မည်အကြောင်းကို ဤနေရာတွင် ဖော်ပြထားပါသည်။ မြေလှုပ်ခြင်းရှိမည်။ သံလွင် တောင်သည် အလယ်တွင် ကွဲသွားလိမ့်မည်။ တဝတ်သည် မြောက်ဘက်သို့လည်းကောင်း၊ တဘက်သည် တောင်ဘက်သို့ လည်းကောင်း ရွေ့သွားလိမ့်မည်။ “ထိုအရပ်တွင် ချိုင့်ဝှမ်းကြီး ဖြစ် လိမ့်မည်။” (J. Vernon McGee, Th.D., Thru the Bible, Thomas Nelson Publishers, ၁၉၈၂, အတွဲ ၃, စာ. ၉၈၆ )
ထို့ကြောင့် ၎င်းသည် ပထမအချက်ဖြစ်သည်။ ခရစ်တော်သည် သံလွင်တောင်ပေါ်တွင် ကောင်းကင်အားဖြင့် ပြန်လည်ဆင်းသက်လိမ့်မည်။
၂။	ဒုတိယအချက်၊ ခရစ်တာ်သည် သန့်ရှင်းသူများနှင့်အတူ ကြွလာမည်။
“ငါ၏ဘုရားသခင်ထာဝရဘုရား ကြွလာတော်မူ၍၊ မိမိသန့်ရှင်းသူအ ပေါင်းတို့သည် ပါကြလိမ့်မည်။” ( ဇာခရိ ၁၄း ၅ )
ဆိုလိုသည်မှာ ချီးဆောင်ခြင်းတွင်ပါဝင်သောခရစ်ယာန်အားလုံးတို့သည် ခရစ်တော်နောက်သို့ လိုက်၍ သံလွင်တောင်ပေါ်တွင် ပြန်လည်ဆင်းသက်ကြမည်။ ဤအဖြစ်အပျက်သည် ဧနောက်က ပထမဆုံး ပရောဖက်ပြုသောအချက်ဖြစ်ပါသည်။
“အာဒံမှဆင်းသက်သော ခုနှစ်ယောက်မြောက်သောသူ ဧနောက် က အတိုင်းမသိများစွာသော မိမိသန့်ရှင်းသူတို့နှင့်တကွ ကြွလာ တော်မူလိမ့်မည်ဟု ပရောဖက်ပြု၍ဟောလေ၏။” ( ယုဒ ၁၅ )
တမန်တော် ရှင်ယောဟန်က ဗျာဒိတ် ၁၉း ၁၄ တွင် မိန့်ဆိုထားသည်။ “ကောင်းကင်ဗိုလ်ခြေ တို့သည် နောက်တော်သို့လိုက်ကြ၏။” သူသည် အန္ထီခရစ်၏စစ်တပ်အလုံးအရင်းကို ဖျက်ဆီးဖို့ ရန် သံလွင်တောင်ပေါ်တွင် ကြွဆင်းလာလိမ့်မည်။ ဒေါက်တာ ယေရမိက ဤသို့ဆိုသည်။
ကောင်းကင်ဗိုလ်ခြေအပေါင်းတို့သည် ခရစ်တော်ဒုတိယအကြိမ် ကြွလာသောအခါ ၎င်းနှင့်အတူ လာကြလိမ့်မည်။ ၎င်းတို့သည် သန့်ရှင်းသူများနှင့်ကောင်းကင်တမန်များဖြင့် ပေါင်းစပ်ထားသော သူများဖြစ်ပါသည်။ သင်နှင့်ကျွန်တော်ကဲ့သို့သောသူတို့သည် ကောင်းကင်တန်ခိုးတော်ဖြင့်ပြည့်စုံလျက် ဘေးချင်းယဉ်ရပ်ကြပါ လိမ့်မည်။ သူတို့သည် တိုက်ခိုက်ကြမည်မဟုတ်။ ယေရှုကိုယ်တိုင် က ပုန်ကန်သောသူတို့ကို ချေမှုန်းပစ်လိမ့်မည်။ ( David Jeremiah ၊ ၎င်း၊ စာ- ၂၂၄ )
သမ္မာကျမ်းစာထဲ၌ အလွန်စိတ်ဝင်စားစရာ ကျမ်းပိုဒ်ဖြစ်ပါသည်။ သခင်ယေရှုခရစ် မြေကြီးပေါ်သို့ ပြန်လည်ကြွဆင်းလာမည့် သာဓကပင်ဖြစ်ပါသည်။ ဤအရာကို ကောင်းကင်ဗိုလ်ခြေအပေါင်း သည် နောက်တော်သို့လိုက်ကြမည်အကြောင်းဖော်ပြထားသည့် ဗျာဒိတ် ၁၉ တွင်လည်း ထိုအကြောင်းကို တွေ့ရပါသည်။ (J. Vernon McGee ၊ ၎င်း )
၎င်းသည် ဇာခရိ၏ပရောဖက်ပြုချက်တွင် ဒုတိယအရေးကြီးသော အချက်ဖြစ်ပါသည်။ ခရစ် တော်သည် မိမိဗိုလ်ခြေအပေါင်းတို့နှင့်အတူ အန္တီခရစ်၏စစ်တပ်ကို ဖျက်ဆီးဖို့ရန် ပြန်လည် ကြွလာလိမ့်မည်။ ခေတ်ကာလအဆင့်ဆင့်ရှိ စစ်မှန်သောယုံကြည်သူများသည် ခရစ်တော်နှင့် အတူ ထိုအချိန်၌ မြေကြီးပေါ်သို့ကြွလာကြမည်။
( “ထောင်ပေါင်းများစွာ၊ ထောင်ပေါင်းများစွာ” Henry Alford, ၁၈၁၀-၁၈၇၁ )
John Cennick နှင့် Charles Wesley တို့က ဤသို့ရေးသားထားကြပါသည်။
အို၊ မိုးဃ်ဖြင့် ကြွဆင်းလာ၊
( “အို၊ သူကြွလာ” John Cennick, ၁၇၁၈-၁၇၅၅၊
Charles Wesley, ၁၇၀၇-၁၇၈၈ က ပြန်၍ပြင်ဆင်သည် ).
၃။	တတိယအချက်၊ ခရစ်တော်သည် ၎င်း၏လောကနိုင်ငံတော်ကို တည်ထောင်ဖို့ ကြွလာလိမ့်မည်။
အားလုံးမတ်တပ်ရပ်ပြီး ဇာခရိ ၁၄း ၉ ကို ဖတ်ရှုကြပါစို့။
“ထာဝရဘုရားသည် တပြည်လုံးတွင် ရှင်ဘုရင်ဖြစ်တော်မူမည်။ ထိုနေ့ရက်၌ ထာဝရဘုရားတပါးတည်း၊ နာမတော်တပါးတည်း ဖြစ်တော်မူမည်။”
( ဇာခရိ ၁၄း ၉ )
အားလုံးထိုင်နိုင်ပါပြီ။ ခရစ်တော်သည် ထိုနေ့ရက်တွင် မြေကြီးကို အုပ်စိုးသောအရှင်ဖြစ်လာပါ လိမ့်မည်။ နောက်ဆုံးတွင် ခရစ်ယာန်များက နှစ်ပေါင်းနှစ်ထောင်ခန့်တောင်းခဲ့သောဆုသည် အဖြေရကြလိမ့်မည်။
“နိုင်ငံတော်တည်ထောင်ပါစေသော်။ အလိုတော်သည် ကောင်းကင် ဘုံ၌ပြည့်စုံသကဲ့သို့ မြေကြီးပေါ်မှာလည်း ပြည့်စုံပါစေသော်။”
( မဿဲ ၆း ၁၀ )
သူသည် နှစ်တစ်ထောင် စိုးစံလိမ့်မည်။ ဗျာဒိတ် အခန်းကြီး ၂၀၊ အပိုဒ်ငယ် ၄ မှ ၆ ကို ကြည့် ကြပါစို့။ ထိုကျမ်းပိုဒ်များကို ကျယ်လောင်စွာ ဖတ်ရှုကြပါစို့။
“ပလ္လင်များကိုလည်း ငါမြင်၏။ ပလ္လင်ပေါ်မှာ ထိုင်သောသူတို့သည် တရားစီရင်ရသောအခွင့်ကို ရကြ၏။ သားရဲနှင့်သူ၏ရုပ်တုကို မ ကိုးကွယ်၊ သူ၏တံဆိပ်လက်မှတ်ကို နဖူး၌မခံ၊ လက်၌မခံဘဲနေ၍၊ ယေရှု၏သက်သေခံတော်မူချက်နှင့်ဘုရားသခင်၏နှုတ်ကပတ် တော်ကြောင့်၊ လည်ပင်ဖြတ်ခြင်းကိုခံရသောသူတို့၏ဝိညာဉ်များ ကို ငါမြင်၏။ သူတို့သည် အသက်ရှင်၍ အနှစ်တစ်ထောင်ပတ်လုံး ခရစ်တော်နှင့်အတူ စိုးစံရကြ၏။ ကြွင်းသောလူသေတို့သည် ထို အနှစ်တစ်ထောင်မကုန်မှီ အသက်မရှင်ရကြ။ ဤထမြောက်ခြင်း ကား၊ ပဌမထမြောက်ခြင်းဖြစ်သတည်း။ ပဌမထမြောက်ခြင်းကို ဝင်စားသောသူသည် မင်္ဂလာရှိသောသူ၊ သန့်ရှင်းသောသူဖြစ်၏။ ထိုသို့သောသူသည် ဒုတိယသေခြင်းလက်နှင့်ကင်းလွတ်လျက်၊ ဘုရားသခင်၏ယစ်ပုရောဟိတ်၊ ခရစ်တော်၏ယစ်ပုရောဟိတ်ဖြစ် ၍၊ အနှစ်တစ်ထောင်ပတ်လုံး ခရစ်တော်နှင့်အတူ စိုးစံရကြလိမ့် မည်။” ( ဗျာဒိတ် ၂၀း ၄-၆ )
ယေဟောဝါသက်သေခံများက နှစ် ၁၀၀၀ နိုင်ငံတော်ကို ယုံကြည်လက်ခံကြပါသည်။ သို့ရာတွင် သူတို့က ထိုနိုင်ငံတော်ထဲ မည်သို့ဝင်ရောက်ရမည်ကို နားမလည်ကြပါ။ “ဒုက္ခဝေဒ နာအပေါင်း လျှင်မြန်စွာ အဆုံးသတ်သွားမည်” ဟူသော ဝေစာသည် ကျွန်တော်ရုံးခန်းထဲတွင် ရှိထားသည်။ ဝေစာထဲတွင် “နောက်ဆုံးသောကာလရောက်လာသောအခါ၊ မည်သူတို့သည် အသက်ရှင်ကြမည်နည်း။ ယေဟောဝါအလိုတော်ကိုသင်ယူသောသူများသာလျှင် အသက်ရှင် ကြမည်” ဟု ဆိုသည်။ ( “ဒုက္ခဝေဒနာအပေါင်း လျှင်မြန်စွာ အဆုံးသတ်မည်”၊ ကင်းမျှော်စင် သမ္မာကျမ်းစာနှင့်ဝေစာအဖွဲ့အစည်း၊ Pennsylvania ၂၀၀၅၊ စာ-၆ ) ထို့ကြောင့် ယေဟောဝါ သက်သေခံများသည် ကောင်းကင်နိုင်ငံတော်ဝင်ရောက်ခြင်းနည်းလမ်းမှာ ဘုရားသခင်၏ သမ္မာတရားကို “သင်ယူ” ပြီး “လုပ်ဆောင်ရန်” သွန်သင်ခြင်းဖြစ်သည်။ ယင်းသည် မှားယွင်း သောအရာဖြစ်ပါသည်။ ကုသိုလ်ကောင်းမှုအားဖြင့် ကယ်တင်ခြင်းအမှားအယွင်းဖြစ်ပါသည်။ ကယ်တင်ခြင်းသည် တစ်ခုခုကို “သင်ယူခြင်း” နှင့် ထိုအရာကို “လုပ်ဆောင်ခြင်း” ဖြစ်ပါသည်။ ယေဟောဝါသက်သေခံတို့၏အမှားသည် ရောမကာသိုလိပ်အသင်းတော်တို့က မကြာခဏ မှားယွင်းပြောဆိုသောအရာနှင့်တူပါသည်။ ကာသိုလိတ်နှင့်ယေဟောဝါသက်သေခံတို့က ကယ်တင်ခြင်းသည် ကုသိုလ်အားဖြင့်လည်းကောင်း၊ သင်ယူပြီးလုပ်ဆောင်ခြင်းကြောင်း လည်းကောင်း ဆိုကြပါသည်။
သမ္မာကျမ်းစာက ကျေးဇူးတော်ကြောင့် ကယ်တင်ခြင်းဖြစ်ကြောင်းကို သင်ကြားပေး ပါသည်။ သင်ယူလေ့လာခြင်းနှင့်လုပ်ဆောင်ခြင်း၊ လူသားတို့၏ကြိုးစားအားထုတ်မှုဖြင့်မဟုတ် ဘဲ ဘုရားသခင်၏ကျေးဇူးတော်သက်သက်ကြောင့်ဖြစ်သည်ကို သင်ကြားပေးပါသည်။
“ယုံကြည်သောအားဖြင့် ကျေးဇူးတော်ကြောင့် ကယ်တင်ခြင်းသို့ ရောက်ရ၏။ ကိုယ်အလိုအလျောက်ရောက်သည်မဟုတ်။ ဘုရား သခင်သနားတော်မူရာဖြစ်သတည်း။ ကိုယ့်ကုသိုလ်ကောင်းမှု ကြောင့်ရောက်သည်မဟုတ်။ သို့ဖြစ်၍ အဘယ်သူမျှ ဝါကြွားစရာ အကြောင်းမရှိ။” ( ဧဖက် ၂း ၈-၉ )
John Newton က ဤသို့ဆိုပါသည်။
ပြစ်သား ငါ့ကို ကယ်ရှာ
( “အံ့ဩဘွယ်ကျေးဇူးတော်” John Newton, ၁၇၂၅-၁၈၀၇ ရေးစပ်သည် )
“သခင်ယေရှုခရစ်ကို ယုံကြည်လော့၊ ကယ်တင်တော်မူခြင်းသို့ ရောက်လိမ့်မည်။” ( တမန် ၁၆း ၃၁ )
“သူ တဖန်ပြန်လာမည်ကျူး” (Mabel Johnston Camp,၁၈၇၁-၁၉၃၇ ရေးစပ်သည်။ )
ခရစ်တော်သည် မိမိလောကနိုင်ငံတော်ကို မည်သို့တည်ထောင်မည်နည်းအကျဉ်း
၁။	ပထမအချက်၊ ခရစ်တော်သည် သံလွင်တောင်ပေါ်တွင် ပြန်လည်ဆင်းကြွ လာမည်။ ဇာခရိ ၁၄း ၃-၄၊ တမန် ၁း ၉-၁၂။
၂။	ဒုတိယအချက်၊ ခရစ်တာ်သည် သန့်ရှင်းသူများနှင့်အတူ ကြွလာမည်။ ဇာခရိ ၁၄း ၅၊ ယုဒ ၁၄၊ ဗျာဒိတ် ၁၉း ၁၄။
၃။	တတိယအချက်၊ ခရစ်တော်သည် ၎င်း၏လောကနိုင်ငံတော်ကို တည်ထောင်ဖို့ ကြွလာလိမ့်မည်။ ဇာခရိ ၁၄း ၉၊ မဿဲ ၆း ၁၀၊ ဗျာဒိတ် ၂၀း ၄-၆၊ ဧဖက် ၂း ၈-၉၊ တမန် ၁၆း ၃၁။